नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सारमा दलाल संसदीय पार्टी
निकै ठूलो रस्साकस्सी, चर्काचर्की, बहस, छलफल, क्रियाअन्तर्क्रिया, विचार, विमर्श, मन्थन जस्ता विभिन्न चरणका आरोह–अवरोह पार गर्दै अन्तत : आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने नामधारी कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एउटै भीमकाय पार्टी बनाउने सपना २५ औं मदन–आश्रित स्मृति दिवसमा पूरा भएको छ । अर्कोतिर जनयुद्ध सकिएको १२ वर्ष पार गरेपछि पेरिस डाँडामा राखिएको तस्बिर र साइनर्बोड तथा दस्तावेजमा बाँचिरहेका माओत्से तुङको वैचारिक आदर्शलाई सधैंको लागि अन्त्य गरिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिलेको अवस्थामा आउनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो । कम्युनिस्ट आन्दोलन अब केही दशक पछाडि धकेलिएको धेरैले अनुमान गरेका छन् ।
नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनताले नचिनेका बिष्ट होइनन्, जनताले राम्ररी चिनेका बिष्ट हुन् । ‘काँही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेझैं यो पार्टी अब दुई अध्यक्षले सञ्चालन गर्नेछन् । व्यवस्थापिका संसद्को पहिलो र तेस्रो ठूलो दल एक भएसँगै नेपालमा अहिलेसम्म असल कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा नभए पनि नामधारी सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको छ । नेपाली राजनीतिका दुई चतुर खेलाडी केपी र पिकेले मुलुकलाई समाजवादको नयाँ यात्रा सुरु गर्नका लागि दुई पार्टीबीचको एकता भएको जनाएका छन् । त्यतिमात्र होइन उनीहरुले समृद्धिको कुरा पनि गरेका छन् । नेपाली राजनीतिमा कसको समृद्धि भइरहेको छ ? के जनताको आधारभूत तहले अनुभूत गर्नेगरी परिवर्तन भएको छ ? सत्तामा बस्नेहरुले समृद्धि त भन्ने कुरा न हो । २००७ सालदेखि नेपाली कांग्रेसले समृद्धि/विकासको कुरा गरिरहेको छ, ३० वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्थाले पनि समृद्धिको कुरा ग-यो अझ २०४६ सालको परिर्वतनपछि त समृद्धिको बाढी नै आयो त्यसमा पनि ०६२/६३ को आन्दोलनले त सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको ठूलो भ्रम छरियो र अहिले आएर अर्को ठूलो भ्रम ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ भनी छरिएको छ । यो नारा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सबका साथ सबका विकास’ को नाराबाट सापटीअर्थात् नक्कल गरिएको हो ।
सामान्तवाद र साम्रज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा सांस्कृतिक क्रान्तिहरु चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्यमा होमिएका जनयुद्धका नाइके प्रचण्ड क्रान्तिलाई धोका दिई दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाई ओली नेतृत्वको पार्टीमा आफ्नो पार्टीलाई विलय गराई अर्थात् अर्को नाम दिई आफू सत्तामा जाने र त्यसको स्वाद लिनेमा लागिपरेका छन् । के १७ हजारको बलिदानी यही दलाल तथा नोकरशाही संसदीय व्यवस्थाको लागि हो ? के प्रचण्डसँग यसको चित्त बुझ्दो जवाफ छ ?
जनयुद्धमा कांग्रेससँग मिलेर जनताको आन्दोलनलाई दमन गर्ने प्रतिक्रियावादी पार्टी तत्कालीन एमालेसँग प्रचण्डले आफ्नो साख जोगाउन चुनावी गठबन्धन ग-यो । सत्तामा तत्कालीन एमालेसँग आफ्ना भाग खोज्यो र अहिले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी पार्टीसँग आफ्नो पार्टीलाई विलय गरायो । यो ज्यादै निन्दनीय र घृणित छ । यहाँ सबैलाई जगजाएर छ –एमाले हिजो पनि संसद्वादी प्रतिक्रियावादी पार्टी थियो र आज पनि त्यही छ । उसले हिजोको आफ्नो वैचारिक तथा राजनीतिक सिद्धान्तमा कुनै फेरबदल गरेको छैन । तर अहिले दुई पार्टीका बीचमा एकता भएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? यसको अर्थ स्पष्ट हुन्छ, यो पार्टी एकता माओवादी केन्द्रको एमालेकरण हुनुको परिणाम हो अर्थात् अर्को शब्दमा माओवादी केन्द्र एमालेको ठाउँमा आइपुगेर यो एकता सम्भव भएको हो । यो माओवादी केन्द्रको एमालेमा वैचारिक विलय हो । हिजो यही प्रतिक्रियावादी सत्ताका विरुद्ध हतियार उठाउने माआवादी अहिले त्यही सत्ताको आडमा क्रान्तिकारीहरु माथि दमनको भाषा बोल्न सुरु गरिसकेको छ । आज आस्थाका आधारमा क्रान्तिकारी पार्टीमा लाग्ने नेता तथा कार्यकताहरुलाई अनेकन झुट्टा मुद्दा लगाई हिजोका सहयात्रीहरुलाई दुःख दिने कार्य भइरहेको छ ।
नवगठित अन्डरलाइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पथ प्रदर्शक सिद्धान्तमा कुनै फेरबदल गरेको छैन । यसले आफूलाई माक्र्सवाद लेनिनवाद भन्छ तर न यसमा माक्र्सवादको झिल्का छ न त लेलिनवादको कुनै गुण छ । सर्वहारा अधिनायकत्व, वल प्रयोगको सिद्धान्त र निरन्तर क्रान्तिको आधारभूत प्रस्थापना नै माक्र्सवादको सारतत्व हो । माक्र्सवादको नाम लिएर माक्र्सवादको मुटुमा छुरा धस्नु, वर्ग संघर्षको कुरा गरेर व्यवहारमा वर्ग समन्वयको बाटो अपनाउनु, राष्ट्रघात र जनहत्याद्वारा साम्रज्यवादको प्रत्यक्ष सेवा गरी पटक–पटक सत्तामा पुग्नु, जनताको नाम गरेर जनताकै टाउकोमा घन बजार्नु आज नवगठित पार्टीको चरित्र बन्न गएको छ । राष्ट्रवादको खोल ओढेर जनतालाई झुक्याउन सफल भएको छ । त्यती मात्र होइन यो पार्टी आफूलाई लेनिनवादी भन्छ तर लेनिनको सिद्धान्तबाट धेरै टाढा रहन्छ । लेनिनले भन्नु भएको छ : साम्राज्यवाद पुँजीवादको उच्चतम रुप हो । त्यसको चरित्र केन्द्रीकृत, परजीवी, पतनशील र मरणोन्मुख हुन्छ । तर, यो नवगठित पार्टीले साम्राज्यवादीहरुको पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्थालाई अँगाल्छ । अतः कसरी भयो लेनिनवादी बडो आश्चर्य छ ?
लेनिन एक प्रतिभाशाली सिद्धान्तकार, रणनीतिकार, महान् सङ्गठक तथा श्रमजीवी जनताको असल नेता र गुरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, समाजवादी क्रान्तिको सफलता मजदुर तथा गरिब किसानहरुको एकता कति सुदृढ छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । समस्त युवालाई सङ्गठित गर्न विशेष जोड दिनुहुन्थ्यो । युवा, विद्यार्थी, मजदुर र किसानबीचको एकताका आधारमा निर्माण भएको संगठनले मात्र क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्ने उहाँको ठम्याइ थियो । लेनिन भूमिगत र वैधानिक सङ्घर्षलाई एकसाथ फ्युजन गरेर मात्र क्रान्ति सफल गर्न सकिन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास हुनुहुन्थ्यो । सहरमा मजदुर र गाउँमा किसानहरुलाई वर्ग सङ्घर्षमा गोलबन्द गर्ने रणनीति यसैको ज्वलन्त उदाहरण थियो । के आज नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मजदुर र किसानलाई वर्गसङ्घर्षमा गोलबन्द गरेको छ ? के यो पार्टीले जनतन्त्रको कुरा उठाउला ? तसर्थ के भन्न सकिन्छ भने नवगठित नामधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले माक्र्सवाद र लेनिनवाद भन्नु सरासर झुट कुरा हो । उसले खाली कम्युनिस्ट ब्यानर प्रयोग गरेको छ र जनताको मनोविज्ञानमा खेलेको छ । यसतर्फ आम कम्युनिस्ट मतदाता सचेत हुनु आवश्यक छ ।
ठूला साना सञ्चार माध्यमहरुले यो एकतालाई लिएर बढी प्रशंसक तथा रोमाञ्चित भए । धेरै जसो ठूला पत्रिकाले त सुरुबाटै यो एकतालाई राम्ररी चाकरी गरेका छन् । यिनीहरुले यो एकतालाई इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी भनेर घोषणा पनि गरे । कतिपय वामपन्थी बुद्धिजीवी, विश्लेषक तथा साहित्यकारहरुले समेत ठूलो प्रशंसा तथा हर्ष बढाइँ गरेका छन् । तर, यो पङ्क्तिकारको बुझाइ अलिक फरक छ । यो एकतालाई इतिहासले गरेको मजाकको रुपमा लिएका छन् । त्यतिमात्र होइन माकेको एमालेमा विलय भएको ठम्याइ छ । अब असली कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरु एक हुनुपर्ने दिन आएको छ भन्ने दृष्टिकोण छ । यसो भनिरहँदा अर्को प्रश्न उठछ के माओवादी केन्द्रको एमालेकरण अहिले मात्र भएको हो ? होइन, यो प्रक्रिया पहिलेदेखि सुरु भइसकेको थियो । अहिले आएर त यो बाहिर प्रकट भएको मात्र हो । जब तत्कालीन माओवादीले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो त्यही प्रस्तावमा माओवादीको एमालेकरण हुने विचारणले गर्भधारण गरेको थियो । चुनावाङ बैठकमा जब प्रचण्डले लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव अघि सारे त्यही बेलादेखि नै एमालेको पुच्छर समातिएको थियो । माके–एमाले एकता प्रक्रियामार्फत एउटा क्रान्तिकारी इतिहास बोकेको नेतृत्व प्रतिक्रियावादी पार्टीमा विलय भएको छ । यस्तो होस भन्ने धेरैको चाहना थिएन । अन्त्यमा एमाले र माओवादी एक भई बनेको नवगठित ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ कम्युनिस्ट पार्टी होइन । कम्युनिस्ट पार्टीसँग हुने सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण र व्यवहार कत्ति पनि यिनीहरुसँग छैन । उनीहरुको व्यवहारले सत्ताबाहेक केही देखाउँदैन । यथार्थमा उनीहरु आफै मिलेका होइनन् साम्राज्यवादी शक्तिहरुले एकठाउँमा ल्याइदिएका हुन् । तसर्थ आम नेपाली यसतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ । क्रान्तिले गम्भीर धक्का खाएको अवस्थामा क्रान्तिकारी शक्तिहरु र देशभक्ति शक्तिहरु एकजुट भई दलाल पुँजीवादी राज्य सत्तालाई फ्यानको लागि र जनताको वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न संघर्ष गर्नु आजको आवश्यकता हो । प्रतिक्रियावाद तथा संशोधनवादको पतन र क्रान्ति तथा माक्र्सवादको विजय अनिवार्य छ । केवल सघर्ष र धैर्यताको खाँचो छ । (आर्थिक दैनिकबाट)